Masar ayaa sheegtay in aan wax horumar ah laga helin wadahadalkii wabiga Niil ee Itoobiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Masar ayaa sheegtay in aan wax horumar ah laga helin wadahadalkii wabiga...
Masar ayaa sheegtay in aan wax horumar ah laga helin wadahadalkii wabiga Niil ee Itoobiya
Wasaaradda biyaha ee Masar ayaa sheegtay Jimcihii in horumar la taaban karo ah laga helin wadahadalladii saddex geesoodka ahaa ee ku saabsanaa biyo-xidheenka Nile ee muranka dhaliyay ee Itoobiya.
Warmurtiyeed ay soo saartay ayaa lagu sheegay in wali “kaladuwanaanshaha aasaasiga ah ee heerarka farsamada iyo sharciga” ee u dhexeeya Masar, Suudaan iyo Itoobiya ay ka taagan tahay buuxinta biyo-xireenka weyn ee Itoobiya, GERD.
Wadahadalada ku saabsan biyo-xidheenka GERD, ee ay Itoobiya ka dhisayso wabiga Niil, ayaa dib loo bilaabay Jimcihii iyada oo loo marayo wadahadalka fiidiyowga ee hoos yimaadda dhexdhexaadinta Midawga Afrika.
Wasaarada arimaha dibada ee Masar ayaa sheegtay in la isku raacay in lasii wado wadahadalada sabtiga iyada oo la adeegsanayo isla qalabkii ay goob joog ka ahaayeen goobjoogayaasha iyo khabiirada.
Masar, Suudaan iyo Itoobiya waxay ku heshiiyeen dabayaaqadii bishii Juun inay sameeyaan guddi khubaro xagga sharciga iyo farsamada ah oo ka kala socda saddexda dal si loo soo afjaro heshiis dhaqan gal ah oo ku saabsan shuruucda buuxinta iyo ka shaqeynta GERD.
Saddexda dal ayaa sidoo kale ku heshiiyay in ay ka waantoobaan in ay qaadaan talaabo kasta oo mideysan ka hor inta aan heshiis la gaarin.
Bishii Juun 20keedii, Masar waxay codsi u dirtay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ee ku saabsan GERD, iyagoo ugu yeeraya golaha UN-ka inay soo fara-geliso “si loo muujiyo ahmiyada Masar, Itoobiya iyo Suudaan inay sii wadaan wadahadalada iyaga oo leh niyad wanaagsan.”
Tan iyo bishii Juun 9-keedii, saddexda waddan waxay qabanayeen kulanno fiidiyoow oo joogto ah oo ay uga wada hadlayaan arrimo ay ka mid yihiin goobjoogayaal ka socda Mareykanka, Midowga Yurub iyo Koonfur Afrika.
Dhawrkii sano ee la soo dhaafay, wadahadallada saddex geesoodka ah ee ku saabsan xeerarka buuxinta iyo ka shaqeynta biyo-xireenka weyn ee biyo-xireennada, oo ay ku jiraan kuwa ay martigelisay Washington, miro-dhal la’aan kusoo dhamaadey.
Ethiopia waxay biloowday dhismaha GERD sanadkii 2011, halka Masar oo ah dal nolosheedu ku tiirsan tahay wabiga Nile ay ku tiirsan tahay wabiga biyahiisa, waxay ka walaacsantahay in biyo xireenku saameyn ku yeelan karo saami dhan 55.5 bilyan-cubic-mitir sanadkii.
Previous articleDEG DEG:- Qarax ka dhacey Dekeda muqdisho Agteeda
Next articleSomalia: Police Command Provides Preliminary Details of the Bombing in Mogadishu
Shirkadda Telesom iyo Hay’adda Maraykanka ee Horumarinta Afrika oo Si Wada...
Kenya oo shaacisay in ay dishay xubno sare oo katirsan Al...